nepaldoor.com: आफ्नै गल्तीले एक्लिँदैछन् आईजीपी
आफ्नै गल्तीले एक्लिँदैछन् आईजीपी
कुवेर सिंह रानाका यस्ता गल्ती
काठमाडौं चैत्र ५(नेपाल डोर) । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना संगठनमा हिजोआज एक्लो बन्दै गएका छन् । एमाओवादीले लामो सयम बार्गेनिङमा राखेर प्रहरी प्रमुख बनाइएका रानाले एकपछि अर्काे गर्दै गलत निर्णय र व्यवहार देखाउन थालेको भन्दै प्रहरी संगठनभित्र रहेका ६१ हजार प्रहरी उनीप्रति सशंकित बन्न पुगेको आरोप लागेको छ । कुनै बेला प्रहरीभित्र आकर्षणको केन्द्र मानिएका रानालाई हिजोआज मन नपराउनेको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ ।
गत भदौंमा आईजीपी बनेका रानाले पहिलो गल्ती दैलेखमा एमाओवादीले जिउँदै गाडेका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको मुद्दा नब्युताउन त्यहाँको प्रहरीलाई निर्देशन दिएर गरेका थिए । दैलेखको प्रहरीले पत्रकारका हत्यारालाई पक्राउ गरेपछि त्यो मुद्दा नचलाउन प्रहरीलाई अपशव्द नै प्रयोग गरेर गाली गरेको चर्चा प्रहरी भित्र छ । उनले गरेको दोश्रो गल्ती, प्रहरी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिनेक्रममा ‘जनयुद्ध कालमा भएका घटनाका मुद्दा नचलाउनू, त्यसतर्फ ध्यान नदिनू’ भन्न भ्याए । जसले कानुनी राज्यको अपहेलना नै गरेको प्रहरीहरु नै बताउने गर्छन् । उनले त्यसपछि देशभरका प्रहरी कार्यालयमा आफ्नोे फोटो झुण्डाउने निर्देशन दिए । जबकि उनीभन्दा अघिका आईजी रविन्द्रप्रताप शाहले हटाएका थिए । आर्थिक चलखेलका लागि कोही निकटलाई फोटा र फ्रेम प्रहरीका युनिटसम्म पु¥याउँदा लाखौं रुपैयाँ कमाउने बाटो बनाउन उनले यस्तो निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ । जसको खण्डन गर्न उनले सकेका छैनन् ।
त्यसपछि उनले अर्काे चर्तिकला देखाए । ३० वर्षे प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाएर आफू र अतिरिक्त महानिरीक्षकको कार्यअवधि २वर्ष बढाउने डिआईजीहरुलाई डिआईजीबाटै अवकास पठाउने उनको योजना बन्यो । त्यो योजनालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले साथ दिए । तर, चौतर्फी बिरोधपछि त्यो योजना सफल हुन सकेन, अहिले थाती छ । यो उनको तेस्रो गल्ती हो ।
पछिल्लो समय प्रहरी निरीक्षकहरुको डिएसपीमा बढुवा प्रकरणमा फेरि रानाले गल्ती गरे । यो उनको चौथो गल्ती हो । पटकपटक कारवाहीमा परेका निरीक्षकलाई बढुवा गरेपछि आईजी राना पुनः अर्काे बिवादमा मुसिएका छन् । तीन पटक कारवाही परेका राजेन्दबाबु रेग्मी, दुई पटक कारवाही परेका दायानिधि घिमिरे र राजकुमार सिलवाल, चार ग्रेड रोक्का भएका महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको बढुवा भएको छ । यस्तै सञ्जयसिंह थापा, कमल थापाको पनि बढुवा भएको छ । यी दुवैजना कारवाही भोगिसकेका प्रहरी निरीक्षक थिए । ०५८ साउन १८ गने निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका र कार्यक्षमता पनि भएका राम्रा अधिकृतलाई बढुवामा छुटाइएको श्रोतको दावी छ । विरेन्द्र शाही, चक्रराज जोशी, दिलिप घिमिरे, अर्जुन तिम्सिना, तेजेन्द्र पौडेल, सुवास बोहोराजस्ता निरीक्षक बढुवामा छुटाइएका छन् । यी निरीक्षकहरु कार्यक्षमता भएका र कारवाहीमा नपरेपनि बढुवा भएनन् ।
आईजी रानामाथि जनकपुरमा ५ जना युवाको हत्या आरोप छ । तर पनि सर्वाेच्च अदालतले उनलाई बढुवाका लागि बाटो खोलिदिएपछि उनी आईजी बनेका हुन् । उनी प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरुको भ्रमणमा जान सक्दैनन् । कारण हो, उनीमाथिको हत्या आरोप । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाझैं उनी पनि अमेरिका, बेलायत, हुण्डरसजस्ता देश गएमा उतैका जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रहरी प्रमुखलाई बोलाउँदा पनि उनी कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई बिदेश पठाउने गर्न थालेका छन् ।
प्रहरी संगठनलाई प्रविधिले सज्जित, क्षमतावान र नैतिक शिक्षाको जानकार बनाउने उनको नीति अहिले हाँसोको विषय बन्न थालेको छ । किनकि उनले गरेका काम एमाओवादीको कार्यकर्ताको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । यहाँसम्मकि उनीविरुद्ध नायव महानिरीक्षकहरु (३४ जना) मोर्चा बन्दीमा छन् । जसकै कारण उनले गरेका सबै कामको गोपनियता रहेको छैन भने राना दिनदिनै विवादित बन्दै गएका छन् । साढे ७ महिना सेवा अवधि भएका उनी त्यो अगावै दुई वर्षे सेवा अवधि थप गरेर प्रहरी प्रमुख भइरहने ध्याउन्नमा रहेको उनी निकटहरुको भनाइ छ ।
म कानूनसम्मत अध्यक्ष
सेनामा जर्नेल/कर्नेलको भोजभतेर, मेजरहरुको रुवाबासी
गाम्काले सरकारलाई नै किनेको छ ।
पाँचखालमा ‘अभ्यास शान्ति प्रयास अन्तराष्ट्रिय तालि...
यत्रो प्रहरी संगठनलाई जम्मा ३ हजार संचारसेट !
अन्तराष्ट्रिय शान्तिको खोजी
गुप्तचरका मान्छेले कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने ?
संविधान मरेसरह, निर्वाचन आयोगमा जबर्जस्ती नियुक्ती
नेपाली दूताबास भवन नबेच्न बेलायतमा दबाब (प्रधानमन्...
पाकिस्तानको ७३ औं राष्ट्रिय दिवस
हृदयाघात भएर समितिभेज अस्पतालमा भर्ना हुनुभन्दा के...
मेलम्ची ल्याएर काठमाडौं पखाल्ने योजना अन्यौलमा
संवैधानिक परिषद्ले संविधान कुल्चिँदा राष्ट्रपति अप...
माओवादी–मधेशवादीबाट सम्भावित राष्ट्रिय खतरा
जुनियर प्रहरी अधिकृत नै अपहरणमा संलग्न
हिजोका जर्साप, आजका कर्साप (फोटोसहित)
छात्राबासमा लागुऔषध र सेक्स व्यापार
यसरी मौलाउँदै छ सुन तस्करी
संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जेफ्री फेल्टमन बुधव...
राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव जेफ्री फेल्टमन सैनिक तालिम ...
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र बल आफैं असुरक्षित !
खिलराज अब अदालत नफर्किने (चार दलले गोप्य राखेको यो...
जेपी गुप्ता रिहा, जेलबाट अन्तिम अपिल, अब तराई -मधे...
रामेश्वर थापाले किने अन्नपूर्ण पोष्ट !
अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई ड्यास माओवादीको ध्यानाकर्ष...
उच्चस्तरिय समितिले खिलराज चलाउने, खिलराजले सरकार च...
युरोपेली संघलाई किन खिलराज प्यारो ?
कर्नेल लामाको लज्जास्पद रिहाई !
निवर्तमान भएपछि.......................... तस्वीरः ...
‘ठूलाबडा’नै ‘अपराधी’ ढुंगेलको बचाउ गर्दै (देवेन्द्...
चुनावी सुरक्षा सहज छैन, प्रहरी र सशस्त्र उच्च सतर्क
चीन सशंकित, भारत र अमेरिका खुशी
जंगी अड्डामा हाँसो र कटाक्ष
विदेश जाने युवाहरु कति ठगिने ?
खिलराजप्रति न्यायपरिषद पनि रुष्ट !
अध्यक्ष खिलराजलाई को को तगारो ?
खिलराजअघि जो चर्चामा थिए.(नारायणकाजीदेखि दमनसम्म) ...
कसरी आए खिलराज ?
खिलराजले लिए शपथ, भावि दिन सहज छैनन्
सशस्त्र युद्धका बेला जागीर छाड्नेहरु (प्रतिवेदनको ...
पछिल्लो जेलजीवनको मेरो रामकहानी
कुटनीतिक नियोग निकम्मा, भद्रगोल कुटनीति
बिपी मासेर साम्प्रदायिक आगो
अलविदा ह्युगो चावेज (जीवनीसहित)
प्रदर्शन गर्न खोज्ने १७ तिब्बति पक्राउ
प्रधानन्यायाधीश आएका दिनदेखि तानाशाही शासन
चुनावको हैन, मुलुकको चिन्ता